Ny mofomam-boninahitra miloko mainty mena dia natokana tamin'ny fampisehoana ny famoriam-bola farany ary nahatonga avy hatrany ny fahalianana mbola tsy nisy toy izany teo amin'ireo vehivavy lamaody. Izy ireo dia natao ho an'ireo vehivavy te-hijery tsara ny fotoana rehetra amin'ny taona. Ity alokaloka lalina ity dia misy endri-javatra manokana rehefa mifangaro amin'ny loko hafa, fa mety amin'ny fomba rehetra .
Amin'ny inona no tokony hanamboaran-damba manga manga?
Ao amin'ireo sehatra, izay notohanana tamin'ny fomba fanehoana klasika, ho toy ny fanasongadinana tena izy ireo, ary hanome endrika manokana. Amin'ny alàlan'ny fanampian'izy ireo, ny orinasa na ny orinasan-tsehatra rehetra dia hitsahatra tsy ho mendri-kaja. Ny kiraro manga manga eo amin'ny voditongotra dia mamela ny vehivavy hijery tsara. Ankoatra ny kiraro, farafahakeliny singa iray hafa amin'ny antoko dia tokony atao amin'ny loko mitovy, raha tsy izany dia tsy ho feno. Mety ho akanjo, akanjo na akanjo hafa izany.
Ny famoronana setroka amin'ny fomba fanehoana klasika, tsy ilaina ny mifikitra amin'ny palette maizina. Esory ny tongolobe, ohatra, misy akanjo fotsy, akanjo lava na skirtina miaraka amin'ny printy geometric voasakana. Ny tena manan-danja indrindra dia tapa-kazo kely na karaoty.
Tena mahavariana ary amin'ny fotoana tsy voafolaka, dia tahaka ny tandindon'ny kiraro manga miaraka amin'ny lobaka sy ny poketrany burgundy. Na eo aza ny zava-drehetra, ny akanjo fiara tsy tokony halalaka.
Ireo mpankafy ny lalana an-dalambe dia afaka mifidy kiraro amin'ny haingam-pandeha, izay hijery tsara sy mahavariana ihany koa. Ny fisian'ny marika eo amboniny dia hampiditra loko manokana amin'ny sary. Raha olo-malaza sy tsy manam-paharoa ianao, dia misy zavatra mavomavo mavomavo, mavomavo na maivana tsara ao anaty tsipìkanao, izay mifanandrify tsara amin'ny lokon'ny manga manga. Ireo combinaingan-javatra toy izany dia ahafahanao manantitrantitra ny maha-izy azy ary tsy manilika azy. Ho an'ny akanjo isan'andro dia ho lasa jeans tsy mety simba ao amin'ny maizina na nentim-paharazana ho an'ny denimin'ny tonony na ny legioma maitso sy mainty.
Rehefa mifidy ny halavan'ny akanjo na akanjo, dia tariho amin'ny haavon'ny kiraro. Ny fonon'ilay tendroka dia tsy tokony handrakotra ilay bootleg, raha tsy izany dia very ny endri-tsoratra fototra amin'ny endriky ny lantihy amin'ny endrika kiraro maingoka.
Ny mason-tsivana, fa ny mendrika dia ny mason-koditra manga sy violet. Io farany io dia tsy afaka manatrika afa-tsy amin'ny akanjo, fa amin'ny fitafiana ivelany ihany koa. Azo jerena ao anaty sary amin'ny T-shirt na ny sweatshirt.
Ambony amin'ny ruffles
Akanjo fotsy mena vita amin'ny hoditra fotsy
Kiraro baolina vita amin'ny hoditra marina
Arosoy ny rahona
Jeans mama - inona ary izy ireo?
Downers Montclair - fifantenana ny sarin'ireo modely maoderina amin'ity vanim-potoana ity
Ahoana no fisafidianana ny akanjo voafaritra tsara?
Tady misy rantsantanana fohy - ahoana ary ny akanjo tokony hatao?
Birao ho an'ny vehivavy bevohoka
Charlotte on maivana
The Fortress of Lazan
Ahoana ny fomba ampianarana ankizy iray hitondra bisikileta roa-kodiarana?
Fandinihana ankapobeny momba ny ra amin'ny ankizy
Sakafo ara-tsakafo ho an'ny fahaverezan'ny lanja any an-trano
Inona no homena olon-dehibe?
Famoronana efitrano iray ao amin'ny efitrano tokana
Troxevasin amin'ny fitondrana vohoka
Vehivavy mandrehitra zava-tsarotra ary lasa tsara indrindra amin'ny raharahany
Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ankizy mpianatra
Charlie Sheen dia hijery amin'ny andian-tantara vaovao
Fibromatose amin'ny tratra
Aostralia - volkano
Ahoana ny fomba hanesorana ny volo?
Fihetseham-po kely eo amin'ny vatana
Ny fialana amin'ny vehivavy dia tsara sy ratsy
Ny herinandro voalohan'ny vohoka - inona no tokony hatao?
Fialantsasatra amin'ny ankizy